1954-1964 Evinrude Johnson 5.5 HP Carburetor Akụ-Up | Outboard Boat Motor Mmezi
1954-1964 Evinrude Johnson 5.5 HP Carburetor Akụ-Up
Oge ọ bụla ị nwere moto ochie nke nọdụrụ ala ruo oge ụfọdụ, i nwere ike iche na carburetor chọrọ ọrụ. Gas, karịsịa mgbe ejiri mmanụ gwakọta mmanụ ga-eme ka ọkpụkpụ ma ọ bụ nke ọ bụla na-ejikọta gị na carburetor ma rie ya na gaskets. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ihe ntinye nke carburetor nke ị nwere ike itinye na tank mmanụ gị ma ọ bụ na-abanye n'ime carburetor ahụ, ha agaghị abịaru nso imezu otu ihe ahụ dị ka onye na-arụ ọrụ carburetor. Ọbụna ma ọ bụrụ na echekwara moto ahụ na-enweghị mmanụ ụgbọala na carburetor ahụ, ikuku gas nwere ike ihicha ma gbasaa ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa mgbe ị na-agbalị iji ya ọzọ. Nanị ụzọ iji jide n'aka na carburetor ga-arụ ọrụ nke ọma bụ iwepu, kpochapụ, dị ọcha, ma jikọta akụkụ akụkụ carburetor ọhụrụ, dochie, ma mee mgbanwe. Ndị a bụ ihe ndị ị ga-eme n'ịmegharị ụgbọelu.
Carburetor bụ ihe dị mfe, dị ọnụ ala, na oge a kwadoro-ngwaọrụ nke jikọtara ikuku na mmanụ tupu ya abanye n'ime ụlọ ọkụ ahụ maka nkwụsị. Carburetor maka ụgbọala a bụ otu carburetor nke a na-eji na steepụ ọtụtụ motọ na ọbụna Lawn-Boy lawnmowers. Enwere otutu akụkụ nke ị na-achọghị ịtọ ka ọ kachasị mma inwe mpaghara dị ọcha na nke a haziri ahazi.
Carburetor bụ akụkụ nke usoro ntụpọ zuru ezu nke na-amalite na tank gas na mmanụ ọkụ. Osimiri ahụ nke jiri ihe ndị a na-eme n'oge 50 bụ ígwè tankị abụọ. OMC mechara hapụ iji tankị na-arụ ọrụ na 60 ma gaa na tankị ndị na-arụ ọrụ. N'iburu ọnọdụ nke tankị na mmanụ ọkụ m aka, ekpebiri m ịgbanwanye na tankị nke na-adị ugbu a site n'ịgbakwụnye mpempe mmanya Mikuni, bụ nke m zụtara n'elu akara maka ihe dị ka $ 22.00, ma na-ejikọta njikọ mmanụ ọkụ na otu ụdị usoro. PỊA EBE A iji hụ nkọwa na foto nke ọrụ m nweta nkwalite.to ndị tankị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ idebe ihe niile dị na moto gị, mgbe ahụ, e nwere ihe nnweta iji dochie akara, njikọta, na akàrà maka tankị nrụgide gị.
Enwere mmanụ mmanụ maka moto a gbakwunyere na ala nke carburetor. Ntucha a bụ nnukwu efere nke a na-achọ iji ọnyà mmiri na sedimenti ma wepụ ya maka nhicha site n'oge ruo n'oge. Ịchọrọ ijide n'aka na tankị mmanụ ụgbọ mmiri ị na-eji eme ihe dị ọcha ma bụrụ nke na-adịghị ọcha, nchara, ma ọ bụ mmanụ ụgbọala. Ọ bụ ezigbo ihe ị ga-eji tụfuo mmanụ ụgbọala na-ejighị ya ma malite oge ọ bụla na mmanụ ọhụrụ. Na mmanụ ụgbọ ala ị na-azụta taa anaghị echekwa ihe ọ bụla n'ime afọ ole gara aga. Ọ bụrụ na o kwere omume, nọrọ na mmanụ ụgbọala ma ọ bụ mmanya ma ọ bụ ethanol na ya ka mmanụ ndị a na-adọta mmiri na ị na-ekpuchi mmiri n'ime mmanụ gị. Ụgbọ ala na-ere ọkụ mmanụ ọkụ kwa izu ma ọ bụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụrụ na ejighị ya mee ihe mgbe niile nwere ike ịnwe mmanụ ọkụ. Ọ bụ ihe ịtụnanya na ọtụtụ mmadụ chere na ha nwere ike ịkwọ ụgbọala ha na mmanụ ọkụ nke dị ọtụtụ afọ.
Ngwakọta mmanụ / mmanụ maka moto a bụ 24: 1. Nke a na-abụ 16 ounces nke TCW-3 gosiri 2 mmanụ na-agbagharị maka tankụ 3-gallon nke 87 octanes mmanụ ụgbọala ma ọ bụ 32 ounces maka tankụ 5-gallon. Mmanụ ugbua nke kachasị na 2 dị ugbu a ga-enwe ọkwa TCW-2. E nwere ihe dịka TCW-3 na nsụgharị ochie kama uru nke iji mmanụ ọhụrụ bụ na ị ga-enweta nkwụsị nke ọma na obere carbon constructionup karịa mmanụ ndị toro mmanụ. Ntuziaka nchịkọta mbụ maka ndị ochie a na-ekwu okwu banyere 2: Nchịkọta 16 nke mmanụ ụgbọala na-eduga na mmanụ bọmbụ 1 ọkọlọtọ ma ị ghaghị iburu n'obi na ọtụtụ agbanweela kemgbe ahụ. TCW-30 bụ ọkwa na mma ụdị mmanụ ọ bụla 3 nwere ike ịzụta taa. Ọ bụrụ na ị nwere agadi TCW-2 mmanụ na-agba gburugburu, gaa n'ihu na-eji ya, ma eleghị anya na tankị ọ bụla tank zuru ruo mgbe ọ na-arahụ. Ọzọkwa, ọ dịghị uru ọ bụla n'iji octane ma ọ bụ mmanụ ụgbọala nke dị elu na-ejide onwe ya na mmanụ aṅụ 2 octanes dị ntakịrị karịa mmanụ ụgbọala na-enweghịzi ya na ụgbọala gị ga-enwe obi ụtọ. Ngwongwo ohuru nke 87 ọhụrụ na-eji 2: ngwakọta mmanụ mmanụ 50 mana nke a abụghị mmanụ zuru oke n'ihi moto gị n'ihi na ụdị bearings nwere n'ime. Ejila ihe ọ bụla na-erughị 1: ngwakọta 24 ma ọ bụ ị nwere ike imebi ụgbọala gị.
Carburetor na-ejikọta ọnụ ziri ezi nke ikuku na mmanụ ọkụ n'ime ngwakọta atomised. Otutu ngwakọta mmanụ / ikuku nke a na-enye n'ime ihe ndị na-eme ka mmiri na-agba mbọ chọpụta ọsọ na ike. Ejikọtara mmanụ na ikuku na venturi, nke a na-akpọkarị kọmgbọm. Obere carburetor a nwere nanị otu mbadamba. The venturi bụ nanị njedebe nke ọma na carburetor site na nke ikuku nke a na-amanye n'ime engine ga-agafe. Ka ikuku na-agafe na njedebe a, ọ na-agba ọsọ na-eme ka nrụrụ dị ala na-aṅụ mmanụ site na ọdụ ụgbọelu nke na-enye mmanụ n'ime venturi ebe ọ na-eme ka ọ bụrụ ọgbọ. Ụgbọ mmiri ahụ na-emepụta mmanụ ya site na efere carburetor nke nwere nnukwu mmanụ na mmanụ ụgbọ carburetor. Ọnụ mmanụ mmanụ na carburetor na-achịkwa mgbakọ valve na float nke na-ejupụta mmanụ. Akwa akwa anụlị na-agba ọsọ na-edozi mmanụ ọkụ na ikuku n'ime obere oke. Olu nke ikuku na-abanye na mbadamba carburetor na-achịkwa valvụ ngwurukpu nke na-agbagwoju anya site na onye na-atụgharị ya.
Nke a bụ carburetor nwekwara nkwekọrịta. Mgbe ị na-adọta bọtịnụ mkpọchi na ihu nke moto ahụ, valvụ nke abụọ na-agbaba, nke dị elu nke venturi na-emechi na-eme ka mmanụ dị elu dị elu na achọrọ ka ịmalite ụgbọ mmiri oyi. Mgbe mbụ ị na-ebido moto gị, ịkwesịrị imechi kpochapụ ahụ site na ịmalite mkpịsị nkị. Ozugbo moto "pop" ma ọ bụ "nsị", ị nwere ike mechie nkpọka ka carburetor dị njikere iji rụọ ọrụ.
Johnson Seahorse 5.5 Carburetor gbawara View
Ị ga mkpa ịzụta a
Carb Kit NAPA Nkebi nke 18-7043 ma ọ bụ ngbanwe maka OMC Ngalaba NJNUMX, 382047, 3832049, 383062, ma ọ bụ 383067
Ejiri m $ 15.49, nke a anaghị etinye efere. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ịzụta ya iche maka maka $ 3.00
Carburetor Akụ-Up Kit
Carb Kit Nọmba nke OMC Nkeji edemede 382045 ma ọ bụ 382046 NAPA / Sierra Number Number 18-7043
Nyere aka na saịtị a: Pịa HERE na ịzụta ya na Amazon.com
Wepụ n'ihu Panel na Air Silencer
Wepụ kposara na-jide ịkpagbu Button, ngwa ngwa na High-Speed ​​Control Isi, na slide awara-atụ na anya.
Wepụ Control Isi
Front Pannel wepu
Wepu mbukota nut maka ngwa ngwa ọsọ ugboelu.
Wepụ ngwa Speed ​​mbukota aku
Ngwa ngwa Speed ​​mbukota aku
Wepụ 4 kposara na-ejide na ikuku silencer wee wepụ ikuku silencer site na-aga n'ihu na-eweli pụọ.
Wepụ Air Silencer kposara
Ebuli na Wepụ Air Silencer
Kwupu erughị ala spring na esetịpụ oge tupu menjuobi wheel megide oge tupu isi.
Wepụ họtara oge tupu erughị ala Spring
Wepụ ihe njikọ ahụ. Jiri foto dị n'okpuru ebe a dịka akwụkwọ maka nhazi. Wepụ ihe kposara naanị iji kwe ka njikọ ahụ kwụsị.
Wepụ trotul Linkage
Wepu ihe ndide ejiji maka onye nhazi ọganihu oge. Kpachara anya ka ị ghara ịmepụta ihe a. Kpatụ onye nhazi ọganihu oge ahụ gaa n'aka nri wee wepu ya.
Oge tupu menjuobi Clip
Na a 7 / 16 spana, wepụ abụọ mkpụrụ na-jide carburetor ahụ na oriri manifold.
Ọ bụrụ na ị họrọ, ị nwere ike ịmego na mmanụ ọkụ mmanụ na tank mmiri na-arụ ọrụ mgbe carburetor gị si na moto. PỊA EBE A ịhụ usoro maka nke a nweta nkwalite.
Ebukọtala na Carburetor Myọcha
Nke a carburetor nwere ntụtụ mmanụ ọkụ na ala nke carburetor. Wepu iko efere. Debe obere obere "ome" ma wepụ ihe nkedo ncha. Wepu mkpuchi roba gburugburu. Ọ dị mkpa iji dozie akụkụ ndị a niile. Ejila chaa chaa chaa chaa chaba ọ bụla n'ihi na roba nwere ike gbasaa. Akuku a dị mkpa iji mechie akara nke ikuku na iko.
Ebukọtala na Carburetor
Debe ma wepu ugbo elu na ngwa ngwa site na n'ihu carburetor. Wepụ ndị na-emepụta ihe ochie. Nke a nwere ike iburu ọrụ iji wepụ ndị a na-eji ihe ndozi ochie ma ị ga-eji ndị na-emepụta ihe ọhụrụ dochie ndị a mgbe ị na-eme nhazi gị.
Wepụ ngwa Speed ​​Jet
Wepụ High-Speed ​​Jet
Carburetor jets wepu
Wepu ihe kposara nke jidere akụkụ nke carburetor elu na nke ukwu. Kpochapụ halves. A ga-eji ihe ndị a na-emepụta ka ọ bụrụ na ọ ga-eji ihe ndị a dị na ha abụọ dochie ya.
Carburetor Isi kposara
Iche Upper na Lower
Nke a bu carburetor nwere nkpuchi mbu. Rịba ama na ọrịrị ahụ na-arịwanye elu ma na-egbu osisi na osisi jupụtara. Nke a carburetor enweghị ike ịrụ ọrụ nke ọma n'emeghị ka ọ daa, kpochachaa, ma mee ka ọ dị ọhụrụ na akụkụ ndị ọzọ.
Wepụ Carburetor ise n'elu
Wepụ Carburetor Bowl gasket
Wepu ihe nkedo ugbo elu. A ga-eji ntụtụ ọhụrụ dochie pin a na kitrị. Wepu nzoputa, ugbo na mgbako valve. Ị ga-eji mgbakọ valvụ nke ọhụrụ na-agbakọta na carburetor.
Wepụ ise n'elu Pin
Wepụ ise n'elu valvụ
Wepụ ise n'elu valvụ Assembly
Wepu nhichaa ọsọ ọsọ elu. Wepu ihe nkedo nile nke aluminum site na n'elu carburetor. Nke a kachasị mfe site n'ịfụ obere obere oghere n'etiti ma na-atụgharị na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ iji kpochaa nkwụ aluminum. Enwere mpempe akwụkwọ ọhụrụ na carburetor ihe ntanetị. Hichapụ ebe n'azụ nkwụnye ahụ. Ozugbo dị ọcha, dochie plọg site na iji aka na-abanye na ebe nwere nkedo ma ọ bụ obere aka. Ọ bụ ezigbo echiche na-etinye otu fim nke silicone gburugburu n'akụkụ nke aluminom nkwụnye iji gbochie ikuku ikuku.
Wepụ High-Speed ​​nozulu
Wepụ Aluminium nkwụnye
Jiri ịghasa Wepụ nkwụnye
N'ịbụ hichaa carburetor akụkụ.
Na-ekpuchi akụkụ nile nke metal n'akụkụ onye na-ehichapụkwa carburetor. Ị nwere ike ịchọọ akụkụ ndị a n'otu abalị na kọfị. Ghichaa ma kpochapu akụkụ nile na ikuku nwere ike ime. Bichaa amaokwu niile ma jide n'aka na enweghi mgbidi. Ọtụtụ n'ime amaokwu ndị a dị ntakịrị ma dị mfe ịnyachi ya. Jide carburetor ahụ na ìhè anyanwụ na-enyocha anya.
Ịchịkọtaghachi ihe Carburetor
N'ụzọ bụ isi, imezi ihe dị ka carburetor dị ka ịgafe usoro nhazi ma laa azụ. Ịnwere ike iyi ụfọdụ n'ime ihe osise ndị a na-eji ma nhazi ma mgbakọ. Enwere ihe ole na ole banyere ndị na-ere ugbo na ị ga-enwe ekele maka iji nlekọta dị mkpa iji mee ka onye ọrụ ugbo gị rụọ ọrụ nke ọma mgbe e mechara yaghachi. Ị ga-achọ ịchọtaghachi ya na akụkụ ọhụrụ site na ebe nchekwa gị. Ịchọrọ ijide n'aka na enweghị ájá, ájá, nkwụsị ma ọ bụ ihe ọkpụkpụ gasị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke mba ọzọ nwere ike ịrapagidesi ike n'otu n'ime obere ụzọ. Otu n'ime nchegbu kachasị mkpa mgbe ị na-ezukọta carburetor bụ ijide n'aka na agaghị enwe ikuku ikuku. Obere ntakịrị ikuku nwere ike ime ka carburetor ghara ịrụ ọrụ. Ị nwedịrị mgbe ị gbalịrị ịkwanye soda site na ahihia nke nwere obere pin prick n'ime ya? Obere ntakịrị ikuku ga-atụfu usoro ziri ezi nke ngwakọta mmanụ / ikuku nke carburetor nwere maka ịmepụta. Were oge gị ma mee nke a. Mgbe ọ dị mkpa, na-ezo aka na-agbawapụta iji chọpụta na ị na-eji ndị bezel na gaskets niile kwesịrị ekwesị. Nke a abụghị otu n'ime ọrụ ndị ahụ ebe ịchọrọ ịfụkọta akụkụ ndị na-efunahụ ma ọ bụrụ na ha bụ akụkụ na ịchọrọ ya na akụkụ ọhụrụ nke carburetor.
Kpọkọtaram Top Ọkara nke Carburetor
Ịghasa na elu-ọsọ nozulu na ileghara na onyeisi gasket. Rịba ama: The red mbukota washer gosiri na foto dị n'okpuru ebe a abụghị eziokwu. The boss gasket bụ thicker, ka nzà, na tan na agba.
Ịghasa na ise n'elu valvụ mgbakọ. Fanye ọhụrụ n'elu mmiri agịga na itinye agịga spring. Gị ochie n'elu mmiri agịga nwere ike ọ gaghị a spring ọhụrụ ahụ bụ, nwere a roba n'ọnụ na-achọ na mmiri na-site n'ịnọgide. The foto nke ọhụrụ na ndị agadi n'elu mmiri valvụ agịga. The ochie agịga bụ on top. Ọ dịghị ihe roba n'ọnụ ma ọ bụ ebe a na-clip na agịga spring. Ise n'elu mmiri bụ ukwuu mkpa mere kpachara anya ghara atọpụ ya agịga spring ma ọ bụ chefuo iji wụnye ya (dị ka m mere). Wụnye ọhụrụ n'elu mmiri na ise n'elu mgbabere uzo pin. Clip ise n'elu agịga mmiri ka ise n'elu mgbabere uzo.
Dochie High-Speed ​​nozulu
Ise n'elu valvụ Assembly
New ise n'elu valvụ si Kit
Dochie ise n'elu valvụ
Dochie ise n'elu valvụ Assembly
New ise n'elu valvụ Clip
Ise n'elu na Pin
Clip ise n'elu agịga mmiri ka ise n'elu mgbabere uzo.
Kwadebe Bottom Ọkara nke Carburetor
Jiri obere ihe egwu, wepụ ihe ọ bụla burrs si oghere ebe isi nke mgbagwoju anya. Jide n'aka na ị ga-awụpụ ájá ọ bụla maka ụrọ nke ígwè na ụfụ ikuku. Nke a ga - adị mkpa ka ịmepụta akara ikuku nke na - ejikọta onyeisi ụlọ. Ghọta ihe ntanye mmanụ. Jide n'aka na nkuku roba di ebe iji mechie akara nke ikuku na iko.
Dochie Myọcha Screen gasket
Dochie kpochara Myọcha Screen
Dochie Myọcha Bowl Akara
Gbakwunye Top na Bottom Ọkara nke Carburetor
Jide n'aka na ejiri oghere kpuchie gasket ahụ. Debe ihe kpochapu ka ha wee nwee ike ịmịcha ma kpachara anya ka ị ghara ịgbachi. Jigide kposara na kpakpando nke mere ka ihe abụọ ahụ na-emekọ ọnụ ọnụ.
Jikọọ Top na Bottom Ọkara nke Carburetor Isi
Wụnye mbukota washers na Mkpụrụ maka High na ngwa Speed ​​ndudu
Tinye nzacha abụọ na-acha uhie uhie n'ime oghere dị nkwụ na ọsọ ọsọ. Ka a na-eme ka akụ ahụ sie ike, ndị ọrụ a ga-agbasawanye ma mee ka akara ikuku dị elu na-acha ọsọ ọsọ na ngwa ngwa. Ha ga-eme ka esemokwu dị mkpa maka aịkpa ndị a ka ha wee nwee ike ime mgbanwe ha. Maka ugbu a, na-eji mkpịsị aka gị eme ihe na nkedo mkpụrụ osisi. Mkpụrụ ngwugwu dị ogologo na-aga n'elu. Gaa n'ihu ma mechie mkpịsị ala nkwụ ala ma elu ga-ewepụ ka dozie ihu ihu.
Kwadebe Carburetor na Ugwu na oriri bara
Ọzọ, ọ dị oke mkpa iji gbochie ikuku ụgbọelu. Ikwesiri igbutu ihe ikuku ozo ka ikwe ka carburetor na-agbakwunye ihe oriri. Jiri faịlụ ka igbanye ala ọ bụla na burrs. Mgbe ị nwere ike ịhụ ihe na-adịghị ahụkebe na gburugburu, ị maara na ị nwekwaghị ntụpọ dị elu. Jide n'aka na ị ga-afụ ụfụ ikuku iji wepụ ihe ọ bụla. Ngwunye carb ga-abịa n'ụdị gasị dị iche iche n'ihi na otu ngwa ahụ nwere ike iji maka ndị na-ebu ugbo. Jide n'aka na ị nwere ezigbo gaskets. Akụkụ nke abụọ na-enye aka ikpuchi carburetor si na ọkụ ọkụ.
Tinye nkuku gas abụọ na ihe oriri ahụ. Jiri mkpịsị aka gị ma tinye mmanụ ndị a na griiz ka ị hụ mkpuchi ikuku. Jide n'aka na ị nwere ezigbo gaskets. Akụkụ nke abụọ na-enye aka ikpuchi carburetor si na ọkụ ọkụ. Jiri nhicha 7 / 16 mee ka akụ abụọ ahụ sie ike. Mkpụrụ ndị a ga-abụ snug mana jide n'aka na ị gaghị agbanyekwu.
Ebe abụọ gaskets na manifold.
Itinye Finished Carburetor ka bara
Kedo sikwuo Carburetor Mkpụrụ
Wụnye họtara oge tupu na trotul Linkage
Mia trotul tupu azụ n'ime ebe na-eji dochie retainer clip.
Trotul Advance Retainer Clip
Dochie njikọ ahụ. Rịba ama na akụkụ ahụ nke na-aga n'ihu na-aga megide akụkụ nke ihe nkedo na oge ọbịbịa. Jigide ihe kpochapu nke mere na njikọ ahụ enweghi egwu kama kpachara anya ka ị ghara ịgbachi nkpa.
Kpatụ Oge tupu Base
N'iji 5 / 16 sụgharịa, gbanwee usoro iheomume nke mere na wiilị na-amalite imetụ isi mmalite oge na akara "mmalite". Mgbe a na-atụgharị ihe na-aga n'ihu, gbanwee njedebe ọzọ nke isi mmalite oge ahụ ka ikuku ngwongwo ahụ na-eme ka valvụ a na-emeghe oghe.
Dochie Air Silencer na Face efere
Wepu agịga ọsọ ngwa ngwa na mkpịsị nri. Dochie ikuku jụụ.
Wepu nri ngwugwu maka ugbo ngwa ngwa. Dochie mkpuchi ikuku ya na ntanye 4. Dochie ngwa ngwa ngwa ngwa na agịga. Ugbu a, i nwere ike ime ka ihe nkedo ahụ dịkwuo ike iji kpochapụ ndị na-emepụta ihe na-eme ka aghara. Jide n'aka na ị gaghị agbanye aka. Agụ ọsọ ọsọ ọsọ ga-enwe ike iji mkpịsị aka gị gbanye ma jiri esemokwu zuru ezu ijide mgbanwe. Iji mkpịsị aka gị mee ihe, tụgharịa ahụla ngwa ngwa na nnukwu ọsọ ọsọ ruo mgbe snug wee laghachi na 1.5 ga-agbanwe dị ka mmalite maka nhazi. Dochie efere ihu, bọtịnụ choke na mkpịsị ọsọ ọsọ.
Your carburetor bụ ugbu a azụ ọnụ na njikere maka tank ule na ukpụhọde.
Ukpụhọde High na ngwa Speed ​​agịga valves
Ịkpụzi carburetor na tank anaghị adị n'otu ka ị gbanwee maka mmiri mmiri. Ị nwere ike ịmalite ntọala mbụ na tank ma mesịa kpaa ntọala ahụ mgbe ị na-apụ na mmiri.
Ịghasa na ala (elu ọsọ) agịga ruo mgbe ọ nọ ọdụ na mgbe ndabere si 1 n'aka.
Ịghasa na n'elu (ngwa ngwa ọsọ) agịga untill nọ ọdụ na mgbe azụ si 1.5 amama.
(High Speed) Malite engine (ọ ga-agba ọsọ mara mma ike ike), ịgbanwee n'ime-atụ gia, ruo zuru trotul. Na agba nke 1 / 8 uzo, na-eche maka engine ime n'etiti ibe, na-amalite na-atụgharị na ala elu na-agba agịga valvụ. Ị ga-eru a mgbe ebe engine ga ma na-amalite na-anwụ anwụ ma ọ bụ gbụsara ọnụ mmiri azụ (ada ka a nwayọọ imebi). N'oge ahụ, azụ si agịga valvụ 1 / 4 n'aka. N'ime na 1 / 4 n'aka, ị ga-ahụ smoothest ọnọdụ.
(Low Speed) ngwa ngwa na engine ala ebe ya dị nnọọ tọrọ na-agba ọsọ. Ịgbanwee n'ime anọpụ iche. Ọzọ na agba nke 1 / 8 emekwa, na-amalite na-atụgharị n'elu agịga valvụ na. Chere a ole na ole sekọnd maka engine meghachi omume. Dị ka ị na-atụgharị na valvụ, na rpms ga-amụba. Lower rpms ọzọ ebe engine ga-dị nnọọ ịnọ na-agba ọsọ. N'ikpeazụ ị ga-see ebe ebe engine chọrọ ịnwụ ma ọ bụ na ọ ga-gbụsara ọnụ mmiri azụ. Ọzọ, mgbe ahụ, azụ si valvụ 1 / 4 n'aka. N'ime na 1 / 4 n'aka, ị ga-ahụ smoothest ngwa ngwa ọsọ ọnọdụ.
Mgbe ị na-okokụre n'elu mgbanwe, ị ga-enweghị ihe mere ime ha ọzọ ma ọ bụrụ na carburetor fouls / goms si ọdụ, nke ikpe ị ga-achọ iji wepu, dị ọcha, ma wughachi carburetor agbanyeghị.
3 ọnwa gara aga
Ndi nwe ohuru nke 3302
25 - 40 HP Pin Drive Props maka Evinrude Johnson
5 ọnwa 2 izu gara aga